Tababare Vincenzo Montella oo lafilayo in caawa uu keydka uga soo tago Carlos Bacca (Maxaa dhacay?) – Gool FM
Tababare Vincenzo Montella oo lafilayo in caawa uu keydka uga soo tago Carlos Bacca (Maxaa dhacay?)
Liibaan Fantastic September 16, 2016
(Milan) 16 Sebt 2016 Tababaraha kooxda AC.Milan Vincenzo Montella ayaa la filayaa in caawa uu keydka uga soo tago weerar yahanka reer Colombia ee Carlos Bacca.
AC.Milan ayaa laga adkaaday 2 kulan 3-dii kulan ee kooxdu ay ciyaartay bilowga xiliciyaareed kan, Montella ayaana sheegay inuusan jiri doonin laacib lama taabtaan ah (aan labadali karin).
Sida laga soo xigtay La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Montella ayaa la filayaa inuu keydka uga soo tago Bacca isla markaana uu ku soo bilaabo kulanka caawa ee Sampdoria weerar yahankiisa kale ee Gianluca Lapadula.
Wararka ayaa intaa ku daraya in arinkaan uu yimid kadib wadahadal dhexmaray isbuucaan Bacca iyo tababare Montella markaas oo Bacca uu ka cabtay in asxaabtiisa kooxdu aysan sifiican u soo gaarsiin kubadda.
Montella ayaa kadib ku jawaabay in ay haboontahay in Bacca uu hubiyo inuu heli karo kubadda isaga oo aan soo gudbin cabasho, sidaas darteed waxaa la filayaa in Gianluca Lapadula uu ku soo bilowdo kulanka caawa kadib qaab ciyaareedkii fiicnaa ee suu soo bandhigay kulamadii Napoli iyo Udinese.
BASKII siday ciyaartoyda Man United oo shil ku galay garoonka Feyenoord
KA WARRAN KOOXDAADA: Waxaa maanta marti ku ah weriye Saalax Cusmaan Diiriye (Sona) (Dhegeyso)